I-Apple icabanga ukuguqula i-iPad Pro futhi iyenze ivundle | Izindaba ze-IPhone
UToni Cortés | 24/09/2021 22:00 | iPad Pro, eziningana
Ekhaya singamalungu omndeni amane futhi ngamunye une-iPad yakhe. Futhi iqiniso ukuthi ukubuka isikhashana ukuthi sizisebenzisa kanjani, i-95% yesikhathi esikwenza ngaso ifomethi evundlile. Sikwenza sibheke phezulu lapho uhlelo lokusebenza ludinga, futhi kubonakala ngathi kuyinkathazo.
I-Apple ibonile ukuthi namuhla abasebenzisi asiyisebenzisi i-iPad njengoba yayenzelwe ekuqaleni. Futhi kubonakala sengathi ekugcineni bazoyiguqula. ECupertino bacabanga ukukhiqiza okulandelayo iPad Pro ngefomethi ye-landscape. Futhi ngicabanga ukuthi kuwumqondo omuhle lowo.
Kusanda kuvela amahlebezi amasha Twitter, futhi uqaphele ukuthi i-iPad Pro elandelayo izokwenziwa ngefomethi ye-landscape. Lokho kusho ukuthi ukwakheka kwekhamera yangemuva nangaphambili futhi ilogo ye-apula yangemuva izoshintshanisa ama-degree angama-90 ukunikeza i-iPad Pro ukwakheka okuvundlile, ikhiphe ebilokhu inakho. mpo, sengathi i-iPhone enkulu.
Umkhondo owodwa wokuthi i-Apple "izoshintshanisa" wonke ama-iPads angama-90 degrees yilokho okwamanje I-logo ye-Apple kusikrini esimnyama lapho uqala kabusha i-iPad isivele ivela ngokuvundlile. Omunye umkhondo ngukuthi i-apula eliphrintwe ngemuva kwekhibhodi yeMicrosoft nalo livundlile. Lokho "akunamathele" kakhulu ngophawu oluqondile lwe-iPad yamanje.
Kucace bha ukuthi selokhu kwafakwa i- Iprosesa ye-M1 Ku-iPad Pro entsha, inkampani iya ngokuya ifuna i-iPad ukuthi isebenze njenge-laptop, futhi lokho kuhilela ukuyisebenzisa njalo ku-landscape.
Eqinisweni, njengamanje umehluko kuphela ohlukanisa i- I-iPad Pro M1 ngekhibhodi yomlingo we IMacBook Air M1 yisikrini sokuthinta sokuqala, nohlelo lokusebenza. IPad Pro M1 entsha ibingasebenza ngaphandle kokuphazamisa inguqulo ye-MacOS Big Sur eguqulwe yaba yisikrini sayo sokuthinta, kepha i-Apple ayifunanga ukwenza njalo, futhi kufanele iqhubeke ne-iPadOS 15. Noma kunjalo ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » eziningana » I-Apple icabanga ukuguqula i-iPad Pro futhi iyenze ivundle